Soo dejisan VirtualBox 6.1.18 – Vessoft
WindowsHorumarinEmulators & Mashiinka WaalidkaVirtualBox
Bogga rasmiga ah: VirtualBox
VirtualBox – software ah in ay virtualize hababka kala duwan qalliinka. VirtualBox waa inay awoodaan in ay ku daydaan nidaamyada badan hawlgalka madax bannaan ka computer ugu weyn, taas oo ka mid ah waxaa jira versions kala duwan ee Windows, MacOS, Linux, Solaris, iwm software The awood si ay u abuuraan ee mashiinada dalwaddii xaddiga loo baahan yahay ee RAM iyo meel ama nooca kaydinta habboon ee drive adag. VirtualBox waa qalab aad u fiican si ay u tijaabiso software jawi nabdoon ama booqo kasta websites in hab qodayaan. Sidoo kale VirtualBox kuu ogolaanaya in aad rights reserved taageerada noocyada kala duwan ee dhexgalka shabakadda, sabuurad la wadaago u dhexeeya nidaamka ugu weyn oo la taaban karin ama ku xidha USB-qalabka.
Virtualization oo ka mid ah hababka kala duwan qalliinka
Orod oo ka mid ah mashiinada badan dalwaddii isku mar
goobaha Individual for mashiinka kasta dalwaddii
sabuurad lagu wadaago
Midaynta desktops u dhexeeya nidaamka ugu weyn iyo martida
Faallo ku saabsan VirtualBox
VirtualBox Xirfadaha la xiriira